Dlala nge-GIMP: Imigqa Yamandla | Kusuka kuLinux
Hyuuga_Neji | | Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Namuhla nginesithukuthezi ngakho-ke sengiqalile ukudlala ngethuluzi lami lokwakha engilithandayo: I-GIMP, futhi kusukela esikhashaneni esedlule bengingashicileli lutho lapha, ngakho-ke lapha ngikushiyela okuthile.
Wonke umuntu uke wabona okuthile ngesaga I-star wars noma i-Star Wars ngakho-ke kumele bazijwayele izibani ze-Jedi.
Yebo, lawo ma-lightabers ahlanganyela okuthile ngobuqili engihlela ukubushiya namuhla kubo bonke abafundi abathanda le seva ethobekile bathanda ukuchitha isikhathi sabo samahhala phambi kwe-GIMP:
1 Umphumela we-Neon
3 Ukudala izintambo zami zamandla
4 Ukufaka umthelela we-neon
5 Ukubeka ukuthinta kokuqeda
Umphumela we-neon wathandwa kakhulu ngeminyaka yama-90s noma kunjalo futhi uqukethe ukulingisa ukukhanya kombala emaphethelweni ezinombolo (amaphosta amaningi okukhanyisa asasebenzisa i-neon ukufeza lo mphumela) futhi kancane kancane kulethwe ezweni labakhethekile imiphumela nokwakheka kukonke.
Imigqa yamandla ekhuluma ngobuchwepheshe, ibizofana ne-Jedai lightabers (umugqa onomphumela we-neon ukuyikhanyisa) kusuka kwa-Starwars, kuphela ukuthi kulezi ngeke babe ngaphansi kwezinto zakudala kodwa njengoba igama labo likhombisa ... bona projekthi yamandla esithombeni esifuna ukusihlela
Ngaleli qhinga ngakhetha ubukhulu bephikseli elingu-800 × 600 futhi ngabeka isizinda esimnyama "ukukhulisa" umphumela weNeon. Lokho kusho ukuthi, saqhubeka sakha iphrojekthi entsha ngalezi zilinganiso.
Ngemuva kokuthi ngibe nephrojekthi yami enesizinda esimnyama (# 000000) ngifuna isinikezelo (isithombe esivele sinqampuliwe) okungaba isithombe esizofaka kuso amandla, ngakhetha ama-samurai ama-bald ayingxenye engiwatholile ku-wallpaper.
Ukudala izintambo zami zamandla
Sisebenzisa ithuluzi leRoutes (B) sinikeza ukuma esikufunayo kulayini wethu, ngokwesibonelo ngazama ukunikeza isitayela sokuzungeza sizungeze sonke isithombe se-samurai njengoba ubona esithombeni.
Kuvumelekile ukucacisa ukuthi ngokwesiko ukusebenza ngesitayela sezendlalelo imizila yenziwa kusendlalelo esisha, ngakho-ke ngaphambi kokusebenzisa ithuluzi lomzila sakha ungqimba olusha ngokusobala ngakho-ke uma kwenzeka singathandi ukuthi imigqa ayilahlekelwa kanjani wonke umsebenzi.
Uma sesifikile kuleli qophelo siyaqhubeka nokwenza unhlangothi kuwo wonke umzila wokuthi sikhethe umbala omhlophe (#FFFFFF) futhi kuzinketho zamathuluzi esiwutshela ukuthi ulandele ngosayizi olinganiselwa kwamaphikseli angama-5 futhi ngaphandle kokukhombisa ithuluzi (dweba umugqa).
Ukufaka umthelela we-neon
Ngalesi sikhathi sesivele sinesibalo nemigqa esiyifakile, manje sidinga ukuyinika ukukhanya kokukhanya. Izihlungi / i-Alpha ku-Logo / Neon futhi sithola inkhulumomphendvulwano ukubeka ezinye izinketho.
Lapho sichofoza ibhokisi lemibala futhi lisivumela ukuthi sikhethe umbala esiwufunayo we-neon yethu, lapho ngikweluleka khona ukuthi ubheke umbala ongaphezulu noma omncane ohlobene nemibala yesithombe esisibeka noma umane eyodwa oyithanda kakhulu.
Lapho ufaka umphumela we-Neon, kudalwa izingqimba ezi-3 (amashubhu we-neon, ukukhanya kwangaphandle kanye nesizinda esimnyama), sisusa ungqimba wangemuva omnyama owenziwe ngumphumela futhi sihlanganise enye i-2 ukuze kube khona okukodwa (chofoza ngakwesokudla ku ungqimba phezulu / hlanganisa phansi).
Ngale ndlela sesivele sinokuthile okufana namaphosta okukhanya ama-90s nama-Starwars lighters kodwa asikaqedi okwamanje.
Ukubeka ukuthinta kokuqeda
Manje yisikhathi sokunikeza ukuthintwa kokugcina emsebenzini wethu, izinto ezibandakanya ukufiphala, sinikeze inkohliso yokuthi imigqa iwela isithombe, njll.
Ngalokho siya ezingxenyeni: siphinda kabili ungqimba lwemigqa bese sisebenzisa ukufiphaza kokunyakaza okungaba ngamaphikseli angama-32 kanye ne-zero degree.
Sikhetha isithombe esinqampuliwe ngokuchofoza kwesokudla kusendlalelo sesithombe bese uchofoza ku-Alfa kuya kukhetho.
Ngale ndlela "sivimba" esikwenzela izindawo ezingaphandle, sizibeka engqimbeni yolayini futhi, siziqondisa ngomfanekiso, sisula izingxenye ukunikeza umbono wokujula kwemigqa yethu, ngemuva kokuningi noma okuncane 2 noma 3 min sinomphumela onjengalo:
Kungenzeka kungabi yimiphumela emihle kakhulu kepha hheyi ... kuyathakazelisa impela futhi into enhle kakhulu ukuthi singayisebenzisa nemibono esiyithanda kakhulu.
Manje kufanele uvivinye i-GIMP yakho bese unikeza umbono wakho ngalokho okucabangayo ngaleli qhinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Dlala nge-GIMP: Imigqa Yamandla
Ngicabanga ukuthi amanye amaphephadonga amahle we-distros onaleyo mphumela angahle
Isifundo esihle kakhulu
Tuto omuhle, kungakuhle uma eyodwa ishicilelwa ngezikhathi ezithile kithi sonke esisebenzisa lolu hlelo oluhle.
Yebo, kufanele umuntu ngamunye kusuka kokuhlangenwe nakho kwakhe, anikele ngolwazi lwethu.
Kunezibonelo ezinhle zamathuluzi osizweni, kepha ngokuzilolonga, ufunda "amaqhinga" okwenza izinto zibe lula.
Manje ungishukumisile ukuba ngishiye i-Photoshop.
Isifundo esihle! Umphumela ungcono uma sidlala ngogqinsi lomugqa
Isikhathi esithile ngizamile ukuyeka i-photoshop bese ngisebenzisa i-GIMP. Kepha angikaze ngikwazi ukuzivumelanisa nezimo, futhi yize i-GIMP inamathuluzi, ayinkimbinkimbi kakhulu ukuwasebenzisa kunalawo e-PS, isikhombimsebenzisi asisithandi kangako.
Ngicabanga ukuthi i-GIMP kufanele ibuke okokugcina ukuthi abaklami bayiphatha kanjani i-photoshop, bese beqala ukusebenza ngamathuluzi 'awabo' enza uhlelo lube yinto yokusetshenziswa ngobuchwepheshe.
Kuhle futhi kulula kakhulu, okunye ongakufunda nge-GIMP 🙂
Okungenani sifunde okuncane nge- "Alpha to Logo." Ngicabanga ukuthi ngendlela efanayo ungenza isiginesha eyenzelwe imivimbo yendlela bese wenza ibhulashi nge-same efanayo
Ukuqaphela: uma ngingaphosisi, kufanele sinake izingqimba ezibonakalayo lapho zihlanganiswa, ngoba uma sihlanganisa siye ezansi kusendlalelo esingenhla, bonke labo ngezansi bazothinteka (kuphela ababonakalayo). Nakekela ngalokho!
Ukulinda ngesineke ukukhanyiselwa i-18 (noma i-19), futhi ngenkathi ufunda u- # 2 we-The Original Hacker